သံမဏိအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဖြီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | တရုတ်သံမဏိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြီးစက်ရုံ
ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြီးသူလေးဟာအလွန်လေးလံပြီးလေးလံသော်လည်းအားကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်ကျောဘက်လျက်ရှိသောအလူမီနီယံနှင့် Anti-static coating ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်ငြိမ်စေနိုင်သည်။
ဖြူဖွေးချောမွေ့သောသံမဏိအံသွားနှင့်အတူဖြီးပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် groomer ကအလွယ်တကူအထူဆုံးအင်္ကျီကိုထိုးဖောက်။
သတ္တုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အချောဖြီးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ဖျာများ၊ ဆံပင်ချွတ်ခြင်းနှင့်ဖုန်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုသန့်ရှင်းစွာကျန်းမာစေနိုင်သည်။
ဖြီးအံသွားအပြီးတွင်သတ္တုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အိမ်အကူသည်မတူညီသောအကွာအဝေးများ၊ အံသွားနှစ်မျိုး၊ သုံးရန်နည်းလမ်းနှစ်ခု၊ ပို၍ အဆင်ပြေပြီးလက်တွေ့ကျသည်။
1. ဤစက်ဖြီးသည်သံမဏိပစ္စည်းမှထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့်သံချေးတက်။ သံချေးတက်ခြင်းမရှိသော၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အကြမ်းခံခြင်း၊ ချိုးဖျက်ရန်မလွယ်ကူပါ။
2. သံမဏိခွေးဖြီးသည်ချောမွေ့။ အကြမ်းခံသောမျက်နှာပြင်ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအံသွားခွေးဖြီးသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အသားအရေကိုခြစ်ရာမကျစေဘဲသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမထိခိုက်စေဘဲအဆင်ပြေစွာဖြီးလိမ်းပုံအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။
3. ဒီသံမဏိခွေးဖြီးသည်ခွေးများနှင့်ကြောင်များ၏ရှုပ်ထွေးမှု၊ ဖျာများ၊ ဆံပင်ချွတ်ယွင်းမှုနှင့်ဖုန်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အရေပြားကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေသည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်သံမဏိဖြီးသည်လက်နှင့်ပိုမိုသင့်တော်ပြီးရိုးရာဘီးများထက် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိမည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဘို့ဤသံမဏိဖြီးသည်သွားများကျယ်သည်။ ၎င်းသည်ဖန်းတီးစရာမလိုခြင်းသို့မဟုတ်အင်္ကျီကိုအသွင်အပြင်ကြည်လင်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မျက်နှာနှင့်နှာကဲ့သို့သောထိခိုက်လွယ်သောနေရာများအတွက်လည်းသင့်တော်သည်။
2. ဤသတ္တုခွေးသံမဏိဖြီးသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိပစ္စည်း၊ မာကြောမှု၊ သံချေးနှင့်ပုံပျက်သောအရာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၁။ သတ္တုခွေးသည်ဖြီးလိမ်းခြင်းသည်မျက်နှာနှင့်ခြေထောက်များကိုပျော့ပျောင်းသောအမွေးထူသည့်နေရာများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်နေရာများတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်သားမွေးထားသည့်အသားများကိုခြစ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
2. သတ္တုခွေးဖြီးဖြီးဖြီးသည်ဖြည်းညှင်းစွာဖြည့်တင်းပေးသောအသုံးအဆောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ဖျာများ၊ ဆံပင်ချွတ်ခြင်းနှင့်ဖုန်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုသန့်ရှင်းစွာကျန်းမာစေနိုင်သည်။
3.It သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကင်းသောဖြီးလိမ်းပုံအတွက်ပေါ့ပါးသောဖြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သတ္တဝါခွေးထိန်းထားသည့်ဖြီးခြင်းဖြစ်ပြီးခွေးတစ်ကောင်ကို undercoats ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်မှုအတွက်ချောမွေ့သော rounded သွားဖြီး။ ပတ်ပတ်လည်ရှိသွားများကညင်ညင်သာသာနှိပ်နယ်ပေးပြီးသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အသားအရေကိုသိသာထင်ရှားစေသည့်ကျန်းမာသောအင်္ကျီတစ်ခုအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။